राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीकी ७६ वर्षिया आमा वृद्धाश्रममा,यसरी चल्छ उनको दैनिकी,यसो भनिन् छोरीलाई
प्रकाशित मिति : : आइतवार, चैत्र २५, २०७४
मैले सोचे, आहा ! अब त बिहान भएछ । तर बिहान हुनु भनेको उज्यालो हुनु हैन, उज्यालो हुनु भनेको बिहान हुनु हैन रहेछ । यस्तो लाग्यो कि, ‘हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा दुई–चार लोटा देखेर नगए ।’ यिनै कुरा गम खाँदै दिउँसोको १२ बजे तिर म सुनसरी जिल्लाको चतरा पुगे । चतरामा एउटा वृद्धाश्रम छ, जहाँ सम्मानीय राष्ट्रपति बिद्या देवी भन्डारीकी ममतामयी आमा मिथिला पाण्डे बस्नुहुन्छ । लामो समयदेखि उहाँ त्यो आश्रममा बस्दै आउनु भएको छ ।
आमाले भन्नुभयो, ‘बाबु तिमि काठमाण्डौबाट आए जस्तो त लागेन ।’ पक्कै पनि लखतरान बनेको यो ‘भातमारा’ शरीर काठमाडौंबाट आए जस्तो थिएन । काठमाडौंका मान्छेमा अलिक फुर्तिफार्ती, हाटहुट हुन्छ । कमिजको टाँक पनि पुरै नलगाएको, जुत्ताका तुनाहरु फुस्केर लत्रे जस्तो, भालेकट कपाल एकदम कडा जेल दलेर ठाडो परेको । सिङ्गो गाँउ लुट्न जाँदा सात दिन नसुतेको लुटेराको जस्तो जस्तो लाग्थ्यो मेरो शरीर आफैंलाई । मेरो पूर्णकदको हुलिया देखेर सम्मानीय राष्ट्रपतिकि आमा मिथिला पाण्डे डराउनु भएछ ।
आमाले भन्नुभयो ‘हेर्नुहोस् बाबु, धेरै समय पहिला यस्तै एकजना मान्छे आएको थियो । क्यामेरा पनि बोकेको थियो । सबैले चिन्छन्, लोकप्रिय पत्रकार हुँ भन्थ्यो । त्यस्तो केही हुन्न मनमा लागेका कुरा भनिदिनुहोस् भन्यो । मैले सुखदुःखका कुरा गरें । तर उसले त सबै उल्टो–उल्टो पो लेखेछ । मैले भनेको कुरा त केही पनि लेखेनछ । उसको मनमा लागेको कुरा लेख्न मलाई भेट्न किन पर्यो त ? कोठमा बसेर जे लेखे नि भयो नि !’
‘म पत्रकार हैन आमा, उल्टो–उल्टो लेख्ने त्यो को होला चिन्दिन । म त्यस्तो लोकप्रिय नि छैन । बराहा क्षेत्रमा भगवानको दर्शन गर्न आएको थिएँ । पाथिभरासम्म जाने विचार छ । केही मित्रहरुले आमाको समाज सेवाको चर्चा गरेको सुनेको थिएँ । तपाईं बस्ने यो घर बाटो मै पर्ने रहेछ । किन नभेट्ने भन्ने लाग्यो । फेरी तपाईं समान्य आमा पनि हैन । यो देशको राष्ट्रपतीको आमा हुनुहुन्छ । हजुरको दैनिकीप्रति सबैको चासो हुने रहेछ ।’
आमा मुस्कुराउनुभयो ।
यसभन्दा अगाडि निजी मामिलामा धेरै बोल्दा समस्या आएको र जो पायो त्यो सँग नबोल्नु भनेर छोरी, नातिनीहरुले सम्झाएको आमाले बताउनुभयो ।
‘राष्ट्रपती मेरो छोरी हो, म त हैन नि । आफ्नो–आफ्नो चाहनाको कुरा हो । खुसी जे गर्दा भईन्छ त्यही गर्ने हो,’ आमाले थप्नुभयो, ‘मलाई यो वृद्धाश्रममै स्वर्गीय आनन्द छ ।’
त्यसपछी मैले उहासँग केही प्रश्न संवाद गरेँ जुन जस्ताको त्यस्तै यहाँहरु समक्ष पेश गर्दछु,
मैले यशोधा पाण्डेसँग मिलेर २०५८ सालमा यो चतरामा श्री रामकुञ्ज अनाथ महिला आश्रम खोलेकी हुँ । म यो आश्रमको संस्थापक अध्यक्ष हुँ । माया लाग्छ नि । मेरा लागि यो राष्ट्रपति भवनभन्दा ठूलो कुरा हो ।
– दिलनिशानी मगर